Margarekha जति बेला पनि अल्छि लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् अल्छीपना हटाउने प्रभावकारी उपाय – Margarekha
जति बेला पनि अल्छि लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् अल्छीपना हटाउने प्रभावकारी उपाय
धेरैचोटि हामी कुनै काम तत्काल नगरेर पछिका लागि टारिदिन्छौं अनि बिस्तारै यो हाम्रो बानी बन्दै जान्छ । यसले हामीलाई अल्छे बनाउँछ ।
अल्छी मान्छेले जीवनमा कहिल्यै सफलता पाउँदैन । यस्तो मानिस निराशावादी हुन्छ । यहाँ हामी केही उपाय बताउँछौं जसलाई अपनाउँदा तपाईंले आलस्य हटाउन सक्नुहुन्छ ।
१) बिस्तारै हिँड्ने बानी
बिहान उठेर भ्रमण गर्नु स्वास्थ्यका लागि आवश्यक कुरा हो । दौडिन अल्छी लाग्छ भने शुरुमा बिस्तारै हिँड्नुस् । दश मिनेट मात्र हिँडे पुग्छ । यसो गर्दा तपाईंको क्षमता बढ्छ र आलस्य भाग्छ ।
२) ससाना ब्रेक
लामो समयसम्म बसेर गर्ने काम छ भने केही समयको अन्तरालमा छोटाछोटा ब्रेक लिनुस् । उदाहरणका लागि ४५ मिनेटपछि पाँच मिनेट जतिको ब्रेक लिनुस् । यसबीचमा अलिकति टहल्नुस् । लगातार काम गर्दा थाकेर अल्छी लाग्छ ।
३) कामका बेलामा मोबाइल साइलेन्ट
आजकल मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिएर दिन बिताउँछन् । कामको समयमा पनि उनीहरू मोबाइलमा घरिघरि हेरिबस्छन् । यसो गर्दा काममा बाधा पुग्छ । काम गर्दा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुस् । ध्यान बाँडिदा पनि थकाइ लाग्छ ।
४) प्रेरक व्यक्तिसँग समय बिताउने
अल्छी लागेर दिमागमा नकारात्मक कुरा आएका बेलामा आफ्ना साथीहरूसँग समय बिताउनुस् । केही सिक्न पाइने र तपाईंलाई प्रेरणा मिल्ने मानिसको संगतमा समय बिताउनुस् ।
५) आफैंलाई मजबुत बनाउनुस्
अल्छीपना हटाउनका लागि अर्काले प्रेरित गरेर पुग्दैन । तपाईं आफैंले आफूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ र मजबुत बनाउनुपर्छ ।
केहि अन्य जानकारी
दिउँसो एक झप्को सुत्नुका फाइदै फाइदा
हामी दिउँसोको समयमा सुत्नुलाई ‘अल्छीपना’को संज्ञा दिन्छौं । तर, दिउँसो सुत्नु साँच्चै अल्छीपना नै हो त ? हो भने एकछिन विचार गरौं त ! तपाईंको आसपासमा रहेका बिरालो तथा कुकुर पनि दिनमा कयौं पटक निदाइरहेका देखिन्छन् । तर, उनीहरु जत्तिको फुर्तिला पनि अरु कोही हुँदैनन् ।
शरीरलाई जसरी खाना र पानीको आवश्यकता पर्छ, त्यति नै आरामको पनि खाँचो हुन्छ ।
अहिलेको व्यस्त जीवनमा हामी दिनभर भागदौड गर्छौं, तर शरीरले त्यस अनुसारको आराम नपाउँदा थकान महसुस हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो शरीर थकित हुनुका साथै दिमाग बोधो हुन पुग्छ र सोच्ने शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ ।
अध्ययन अनुसार दिउँसो सुत्नुका फाइदाहरू यस्ता छन् :
दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ
थकित महसुस भएको बेला तपाईंलाई भोक लागेको छ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिले जे भेट्यो त्यही खानुहुन्छ । यसबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको केहीबेरको सुताइ नै हो । केही क्षणको सुताइले तपाईंको शरीरलाई थप ऊर्जा मिल्छ नै, यसले तपाईंलाई हानिकारक खाना खानबाट समेत जोगाउँछ । अझ १०/१५ मनेटको आरामले तपाईं आफूलाई के खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सोच्न सक्ने स्थितिमा पुग्नुहुन्छ ।
हुन त सुत्नु भनेको भौतिक कामबाट केही क्षण विश्राम लिनु पनि हो । तर,अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाए अनुसार, आराम नगर्ने धावकहरुको तुलनामा तालिमको बीचमा केही क्षण सुत्ने धावकहरुको नतिजा राम्रो पाइयो ।उनीहरुमा ऊर्जा र स्फूर्ति बढेको पाइयो । यसर्थ बल, प्रतिक्रिया तथा गति सबै कुरामा सुधार ल्याउन निद्रा अपरिहार्य छ ।
त्यसो हो भने कुन बेला कसरी सुत्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ त?
समय : ११/१२ बजेको समय दिउँसो एक निद्रा सुत्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
स्थान : हल्का उज्यालोको साथमा चिसो तथा शान्त कोठा ।
अवधि : ५ देखि ४५ मिनेटसम्म ।
दिउँसो एक झप्को निदाउनु आरामको लागि मात्र नभई स्वास्थ्यको लागि पनि आवश्यक छ । तर, धेरैजसो मानिस यसलाई बेवास्ता गर्छन् । त्यसैले, दिउँसोको व्यस्त समयबाट एकै छिन भए पनि फुर्सद निकाल्नुस् र आफ्नो शरीरलाई आराम दिएर स्फूर्ति प्राप्त गर्नुस् । बिर्सनुस्, दिउँसो सुत्नु भनेको अल्छीपना हो ।
दिउँसो सुत्ने बानी, राम्रो गर्छ कि हानी ?
तपाईं/हामीले सुनेका छौं, चीनका कतिपय कम्पनीले कामदार/कर्मचारीलाई मध्यन्ह कार्यकक्षमै एकक्षण सुत्ने छुट दिन्छ । भनिन्छ, त्यो परम्पराकै रुपमा विकास भएको छ । र, कर्मचारीहरु क्षणभरका लागि सुत्नमा अभ्यस्त हुन्छन् । कतिपय कम्पनीले त कर्मचारीलाई दिउँसो सुत्नका लागि ओछ्यानकै व्यवस्था गरेका छन् ।
हामी भन्छौं, दिउँसो सुत्नु राम्रो होइन ।
राम्रो किन होइन भने, दिउँसो सुत्नु भनेको दिनभरको काम प्रभावित बनाउनु हो । हामी बिहान उठेपछि दिनभर काममा व्यस्त हुन्छौं । र, राती एकै पटक ओछ्यानमा पल्टन्छौं ।
यद्यपी कतिपय भने फुर्सद निकालेर पनि दिउँसो सुत्छन् । के दिउँसो सुत्नु राम्रो हो वा नराम्रो ? प्रश्न सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यो हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो । अनुसन्धानमा के देखिएको छ भने, दिउँसो सुत्दा अल्छी हुने होइन बरु ताजगी महसुष हुन्छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत बृद्धि हुन्छ ।
प्राय मानिसहरुको राती सुत्ने र दिनभर काम गर्ने बानी हुन्छ । तर, केही मानिसहरुको भने दिँउसो पनि केही समय सुत्ने बानी हुन्छ ।
दिउँसो सुत्ने बानी भएका मानिसहरुलाई बिहान खाना खाइसकेपछि सुत्न मन लाग्छ । काम गर्दागर्दै उनीहरुलाई अल्छी लाग्छ र निदाउने गर्छन् ।
यस्तो बानी भएका मानिसहरुलाई दिउँसो थकान महसुस हुन्छ र निन्द्रा लाग्न थाल्छ । दिउँसो सुत्ने मानिसहरुलाई धेरैले अल्छीको संज्ञा दिन्छन् ।
त्यस्तै दिउँसो सुत्ने बानीलाई लिएर हरेकको मनमा दिँउसोको निन्द्रा राम्रो हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि तपाईं पनि आफ्नो दिउँसो सुत्ने बानीबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने बुझिराख्नुहोस् यो नराम्रो बानी होइन बरु धेरै राम्रो बानी हो ।
दिउँसो सुत्ने मानिसहरु माथि युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाका शोधकर्ताले गरेको एक शोधमा यो बानीले अल्छीपना भगाउने तथ्य पत्ता लगायो । शोधको नेतृत्व गरेमासाइकोलोजीका असिस्टेन्ट प्रोफेसर फिलिपका अनुसार यसले अल्छीपना टाढा गर्नेमात्रै नभई मानिसको समग्र कार्यक्षमता र रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि मजबुत बनाउँछ ।
जो मानिस दिउँसोको समयमा सुत्छन् उनीहरुमा मुटु रोग लाग्ने खतरा अन्य मानिसहरुको तुलनामा कम हुन्छ ।
जो मानिस दिउँसोको समयमा १५-३० मिनेट निदाउँछन् उनीहरुको अल्छीपना टाढा हुन्छ । त्यस्तै तनाव वा मानसिक थकानलाई टाढा गर्न चाहनुहुन्छ भने दिउँसो ९० मिनेट निदाउनु राम्रो हुन्छ ।
दिउँसो सुत्ने मानिसहरुमाथि भएको एक शोधमा वर्कआउट पछि तुरुन्त सुत्नु राम्रो कुरा नभएको कुरा पनि अगाडि आएको छ । किनभने व्यायामपछि दिमागले तिव्र रुपमा काम गर्न थाल्छ । जस कारण निन्द्रा र थकान महसुस हुन्छ तर स्वस्थ रहनको लागि व्यायाम गरेको कम्तीमा २ घन्टापछि सुत्नुपर्छ ।
आम रुपमा हरेक मानिसलाई एक दिनमा ७-८ घन्टाको निन्द्राको आवश्यकता हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, यसको लागि कुनै सामान्य नियम हुँदैन ।
यसैगरि १४ देखि १९ वर्षका किशोरहरुलाई ८ देखि १० घन्टा निदाउन राम्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
वयष्क मानिसहरुको लागि ६ देखि ८ घन्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ । ६ घन्टाभन्दा कम सुत्नाले भने स्वास्थ्यलाई असर गर्छ ।
१० श्रावण २०७६, शुक्रबार ११:३१ प्रकाशित